डेथ मिर्‍याकल / रोशन थापा 'नीरव' | Online Sahitya
डेथ मिर्‍याकल / रोशन थापा 'नीरव'
Roshan Thapa Nirav
त्यो मान्छे मेचमा बसेको थियो । बसेको पनि के भन्नु किनभने बसेको भन्नु बसाइँको सौन्दर्यशास्त्रीय अर्थमा आघात पुग्न सक्थ्यो । यसैले बरु सोध्न सकिन्थ्यो-किन बसेको थियो ? यद्यपि यो प्रश्न गर्नु पनि त्यति नै अनुचित थियो, जति नागरिकको भोको पेटका लागि अन्न होइन, पानी भए पुग्छ भन्ने आशय नेताले सम्प्रेषण गर्नु । त त्यो मान्छे... मान्छे नै किन भनियो भने त्यो अन्य जन्तु थिएन । मान्छेका रूपमा नै थियो । त्यो यति बेला मेचमा बसेको थियो । आराम गर्न भनेर वा अन्य केहीका लागि भनेर त्यो त थाहा भएन । बरु त्यो मान्छे यति बेला जुन रूपमा थियो, त्यो भने बीभत्स थियो । बीभत्स पनि कस्तो भने त्यस मान्छेका बीचको शरीरबाहेक अन्य अवयवहरू अनौठा वा शङ्कास्पद घेराबाट आवृत्त भएका थिए । यो रहस्यात्मक रिपोर्टिङ नभएर मायिक यथार्थ जस्तो लाग्ने दृश्य प्रक्षेपण हो, जुन यति बेला यहाँ गरिँदै छ । त्यो मान्छेका दुई आँखा भुक्क सोडाको गुच्चा जस्तो खुकुला भएर बाहिर निस्केर गेडे फल जस्तो तुर्लुङ्ग झुन्डिएका थिए । कानहरू पनि पछाडिपट्ट िमोडिएका । जिब्रो बाहिर टाङ्गिएको रातो मोजा जस्तो बनेको थियो । नाक बाङ्गएिको थियो । हात र खुट्टा...भन्नै पर्दैन लुला र भाँचिएर सानो हावामा पनि हल्लिने भएका थिए । अब यस्तो मान्छेलाई आराम के
भन्ने ? त्यति मात्र होइन, जीवित नै हो वा होइन ? यो पो थाहा पाउनुपर्ने । अवयव यस्तरी निमोठिएपछि कोही बाँच्छ भने त्यो मान्छे होइन, हाम्रो किंवदन्तीअनुसार प्रेत भन्नुपर्ने हुन्छ । यदि मरेकै हो भने पनि यो कस्तो खाले मृत्यु हो त ? मृत्यु यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुनै पनि मृत्युकोशमा लेखिएको पाइँदैन भने यस्तो मृत्यु...?
-तर हाम्रो भनाइको अर्थ आगामी दिन भन्ने हो नेताज्यू
-प्रश्न अशिष्टताको भानमा डुबुल्की मारेको अनुभव होला । अब नेता क्रूद्ध भएर आफ्नो बुद्धत्व फालेर कुर्लेला तर त्यस्तो केही भएन । बरु हाई गर्दै वा केही चपाउँदै बडो सरल वाणीमा यस्तरी उत्तर दिए, त्यो सुन्दा हामी यस देशका नागरिक हुनुमा गौरव गर्छौं भनेर कसैले भने वा बोले भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।)
-नेपाली पानीमा यस्तो पावर अर्थात् डुबाउने शक्ति कहाँबाट
आयो ? यो हेर्न ।
अक्षरहरूले शान्त होइन । ऊ त उप|mन पो लाग्यो । त्यहाँका रचनाहरू उसका चिरपरिचितहरूका थिए । चिरपरिचितभित्र उसका अग्रज, मित्र, आफन्तहरू समावेश थिए । ती सबैमा एउटै पात्रको प्रयोग उपयोग गरिएको थियो र त्यो पात्र अरू कोही नभएर ऊ नै थियो । अग्रजले उसको कमजोरीमाथि व्यङ्ग्य गरेका थिए । उसको दयनीय स्थितिलाई हास्यात्मक कथा बनाइदिएका थिए । उसबारे कपोलकल्पित लाग्ने केही छुद्रताहरूको चित्रणलाई लिएर उसमाथि विनिर्माण गरिदिएका थिए । केही मित्रले चाहिँ झन् उसमाथि स्वार्थवादको उत्तरआधुनिक लेनदेनमा उपयोग गरी उसैलाई फुटकर रचनाका खलपात्र बनाइदिए र सर्वत्र घोषणा गर्दै हिँडे-'ल है, यो मान्छे झूर हो र यसको लेखनप्रवृत्ति सबै व्यर्थ हो' आदि भनेर ईष्र्याका महासागर बगाइदिएका थिए । आफन्तहरूले चाहिँ यो बढी घमन्डी, कोहीसँग नझुक्ने, आफ्नो अहंमा बाँच्ने भनेर कसरी एक्लो र निरीह पार्ने योजनासँगै आत्मकथात्मक रचना निर्माण गरेका थिए ।
आज ऊ कतै गएको थिएन । जानु पनि कहाँ ? कतै, कुनै, केही आशालाग्दो त्यान्द्रोसमेत फेला परेको थिएन । उसको मामलोमा यस्तो किन भयो ? अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखियो तर गर्ने किन ? हास्यास्पदमाथि दयनीय हुन ? दयनीयमाथि हास्यास्पद हुन ? भनाइको सङ्क्षेप यही थियो, ऊ प्रायशः बाहिर जाँदैनथ्यो । धेरैसँग भेट्न पनि छोडिदिएको थियो तर घरमा रहनु पनि त्यति नै पीडाभित्र ग्रस्त रहनु हुँदै थियो उसलाई, जति बाहिर पुगेपछि निराशा भेट्नु । कारण अरू थिएन । उही बेकारी स्थितिका कारण । सन्तान हुर्कंदै थियो । श्रीमतीले सानोतिनो रकम कमाउने गर्थी । पसल थापेकी थिई, कोल्ड स्टोरको । त्यसैबाट सानो आम्दानी हुन्थ्यो तर आम्दानी उसका लागि सहयोग होइन, पीडामाथि पीडा र व्यङ्ग्यमाथि व्यङ्ग्य दिने खालको बन्दथ्यो । मान्छे भएर बाँच्न गाह्रो हुन्छ भाइ, बारम्बार हाँसेर अरूलाई भन्थ्यो । अब अहिले रोएर आपै"mलाई भन्नुपर्ने थियो ।
अब पत्रिकामा यस्तै हत्या खबरबाहेक अरू छापिने भएन । उसले सोच्यो र पत्रिका फाल्यो । आँखा चिम्लियो । चिम्लाइको केन्द्रभित्र कतै कुनै अस्पष्ट मुखाकृति साउती मार्न आयो को ? उसले ठम्याउन चाहृयो । स्वर नारी जस्तो लाग्थ्यो-के यी मेरी पूर्वप्रेमिका हुन् ? होइन । अर्को पुरुष स्वर आउँदा लाग्यो, यो मेरै प्रतिबिम्ब हो । भन्दै थियो-हेर भाइ, निरीहका लागि यस संसारमा कोही आफ्नो हुँदैन, न परिवारमा, न समाजमा, न साहित्यमा, न देशमा, न समयमा । आफू सधैँ एक्लै बाँच्नुपर्छ । गरुन्जेल वा सकुन्जेल सबै आफनो हो, नसके कोही वा केही पनि आफनो होइन । यसैले तिमी सधैँ एक्लो, अभिशप्त पात्र जस्तो आफनो जीवन भोग्न विवश र बाध्य एकसाथ छौ । यहाँ बाँच्न र माग्नलाई केही न केही कारण र उपाय चाहिन्छ भाइ...। स्वर विलुप्त भयो । विलुप्त हुनाको कारण कुनै कर्कश स्वर हुनसक्छ । यस स्वरमा उसको अथाह पीडा प्रतिबिम्बित हुने गथ्र्यो ।
यथार्थतः प्रत्येक युगमा, प्रत्येक समयमा, प्रत्येक तन्त्रमा पीडित, शासित र शोषित कोही हुन्छ भने त्यो नागरिक नै हो, नागरिक जति नै दक्ष होस् । यस्तै प्रकरण उसमाथि प्रत्यारोप भएको थियो । ऊ सम्पूर्ण मनोरञ्जनयुक्त मासिक भनेजस्तै खालको पारिवारिक थियो । परिवारमा केके वाक्य, वाक्यांश आरोपित हुने गर्छ, त्यो माथिका दृश्यदृश्यांश वा अन्य कुनै फेमिली ड्रामा सोचपछि स्वतः थाहा लाग्न सक्थ्यो तर उसका सन्दर्भमा पनि चारैतिरबाट ऊ एक्लो र निरीह हुनको भावले ग्रसित थियो । काम प्रशस्त थियो देशमा तर उसका लागि रोजगारी थिएन । नेताहरू प्रशस्त थिए परिचित तर उसका लागि सहयोगी थिएनन् । सान्त्वनाहरू अनेक थिए, उपयुक्त कुनै थिएनन् । त्यसमाथि ऊ बेलाबेला विद्रुप आवरण बोकेर हिँड्ने गर्दा आख्यान, कथा, कवितामा मात्र होइन, देशैमा पनि उसबारे मिथक, प्रतीक, व्यङ्ग्य निर्माण हुने नै भयो । फलतः सबभन्दा पहिला जुन सत्ताका लागि उसले भर गर्‍यो, त्यसैले उसमाथि 'युज एन्ड थ्रो' को घन ठोक्यो र उसको टाउको चरक्क चक्र्यो । जति पनि अग्रज थिए उसले आदर गर्ने, ती सबैमा केहीले उसको अयोग्यताबारे नै प्रवचन र अलङ्कार निर्माण गर्न कलम खोप्यो र उसको आँखा दुख्यो । बेलाबेला जुनजुन मित्रलाई उसले सहयोग गर्ने गथ्र्यो, तीती मित्रहरूले उसबारे लाञ्छनाको हतियार लिएर उसको वाणीमाथि प्रहार गरे र उसको जिब्रो लाटो भयो । एवं रीतले आफन्तहरूको असहयोग आन्दोलनले उसमाथि जुन दङ्गा गर्‍यो, त्यसले उसका हातखुट्टा व्यर्थका बने । फलतः निष्कर्ष बन्यो-देश एउटा प्रेतखोर । अग्रजहरू व्यङ्ग्यनिर्माता । मित्रहरू हतियारी दैत्य । आफन्तहरू राहुकेतु । यी सबै प्रपञ्ची मायिक जालमा ऊ यस्तरी पर्‍यो, फस्यो र तड्पियो, जसबाट ऊ मान्छे होइन, कुन्नि के बन्यो अनि त्यसपछि के भयो ? समापन ?